किन सास गन्हाउँछ, कसरी छुटकारा पाउने ? – NawalpurTimes.com
किन सास गन्हाउँछ, कसरी छुटकारा पाउने ?
प्रकाशित : २०७८ साउन ६ गते २१:१९
काठमाडौँ – अधिकांश मानिसलाई सास गन्हाउने समस्या हुन्छ। ‘दिनै दाँत ब्रस गरे पनि मेरो मुख साह्रै गन्हाउँछ’ भन्नेहरु धेरै भेटिन्छन्। ताजा सासले मानिसलाई अरुको अगाडि लज्जित हुनबाट जोगाउँछ भने दुर्गन्धित सासले तपाईंलाई मात्र होइन, तपार्इं वरपर बस्नेलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ।
मानिसको स्वासको दुर्गन्ध हुनुमा मुखको सरसफाइमा कमी या कुनै ठूलो रोगको लक्षण समेत हुन सक्छ। यसैले मुख गन्हाउने समस्यालाई हल्का ढंगले लिनु हुँदैन। मुख वा स्वासको दुर्गन्धलाई डाक्टरी भाषामा ‘हयालिटोसिस’ भनिन्छ।यो धेरैजसो मुखमा ब्याक्टेरियाको मात्रामा वृद्धि भएर हुन्छ। यो ब्याक्टेरियाले निस्किने सल्फर कम्पाउन्डका कारण सासमा दुर्गन्ध उत्पन्‍न हुन्छ, मुखमा दुर्गन्ध आउनुको मुख्य करण दाँतको उचित सरसफाइ नहुनु नै हो।
सास गन्हाउनुका कारण :
पेटको समस्याः कतिपय अवस्थामा आन्द्रा वा पेटमा समस्या हुँदा पनि मुख गन्हाउने गर्छ। पेटको अल्सर भएमा यस्तो समस्या आउँछ। त्यस्तै, कार्बोहाइड्रेड न्यून भएका खानेकुरा खाँदा पनि सासबाट गन्ध आउँछ। यस्ता खानाले ‘केटोन’ नामक दुर्गन्ध फाल्ने भएकाले सास गन्हाउने हुन्छ।
धूमपानः चुरोट सेवन गर्नेको सास सँधै गन्हाइरहेको हुन्छ । यस्तै, सुर्ती, गुट्खा खाने कुलत लागेका मानिसको मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ ।
ब्याक्टेरियाः मुखभित्र ब्याक्टेरिया भएमा सास गन्हाउँछ। स साना ब्याक्टेरिया तपाईको दाँत र जिब्रोमुनि लुकेका हुन सक्छन्। यी ब्याक्टेरियाले मुखभित्र रहेर अन्य ब्याक्टेरिया उत्पादन गर्नुका साथै निरन्तर दुर्गन्ध छाडेका हुन्छन्, जसका कारण हाम्रो मुख नराम्रोसँग गन्हाउँछ।
टन्सिल: टन्सिल फराकिलो र वरपर ससाना छिद्र छन् भने पनि सास गन्हाउँछ। बिहान–बेलुका खाएका खानेकुरा र चिल्लो पदार्थ यस्ता टन्सिल वरपरको छिद्रामा जम्मा हुने हुँदा दुर्गन्ध आउँछ।
दुर्गन्ध हटाउने उपाय